Qamba iHodges Hawk Mascot »IHodges University
Qamba iHodges Hawk Mascot!
Sifuna Usizo Lwakho!
SineHodges Hawk njengemascot yethu, kepha uHawk wethu udinga igama.
Lo mncintiswano uvulelekile kubo bonke ubuhlakani beHodges University, abasebenzi, abafundi, ama-alumni, nomphakathi wonkana. Thumela nge-imeyili ukungena kwakho ku: Marketing@hodges.edu. Faka igama lakho nesibongo, ikheli le-imeyili, negama elilodwa le-Hawk.
Imithetho kanye Nemininingwane Esemthethweni
AKUKHO UKUTHENGA KUDINGEKA UKUNGENA NOMA UKUWINA. UKUTHENGA AKWANDISI AMATHUBA OKUPHUMULA.
Ukufaneleka: Lo mncintiswano uvulekele kuphela ubuhlakani beHodges University, abasebenzi, abafundi nama-alumni. Umncintiswano uvulekele kuphela izakhamuzi ezisemthethweni e-United States, futhi awunalutho lapho kungavunyelwe khona ngumthetho. Umncintiswano ungaphansi kwayo yonke imithetho kanye nemithethonqubo esebenzayo yenhlangano, yezwe neyasekhaya. Akusebenzi lapho kungavunyelwe khona.
Isivumelwano Nemithetho: Ngokuhlanganyela, umncintiswano (“Wena”) uyavuma ukuboshwa ngokuphelele ngaphandle kwale mibandela ngaleyo Mithetho, futhi Wena umele futhi uqinisekise ukuthi Uhlangabezana nezimfuneko zokufaneleka. Ngaphezu kwalokho, Uyavuma ukwamukela izinqumo zeHodges University njengezokugcina futhi ezibophayo njengoba kuhlobene nokuqukethwe kulo mncintiswano.
Isikhathi somncintiswano: Okufakiwe kuzokwamukelwa kusukela ngoLwesibili, Septhemba 15, 2020 ngo-7: 00 am EST futhi kuzophela ngoLwesithathu, Sept. 30 ngo-11: 59 pm EST. Konke okufakiwe kumele kutholakale ngoLwesithathu, Septhemba 30, 2020 ngo-11: 59 pm EST nge-imeyili ku: Marketing@hodges.edu.
Ungangena kanjani: Okungenayo kufanele kufezekise zonke izidingo zomncintiswano, njengoba kuchaziwe, ukuze ufaneleke ukuwina umklomelo. Okufakiwe okungaphelele noma okungathobeli imithetho noma ukucaciswa kungahle kungavunyelwa ngokubona kweHodges University kuphela. Ungangena kanye kuphela, unikeze igama ocabanga ukuthi iHodges University Hawk kufanele ibe nalo. Awungeke ufake izikhathi ezingaphezu kokubonisiwe ngokusebenzisa amakheli e-imeyili amaningi, ubunikazi, noma amadivayisi ukuzama ukweqa imithetho. Uma Usebenzisa izindlela zomgunyathi noma ngenye indlela uzama ukweqa imithetho, okufakwayo kungasuswa ekufanelekeni ngokubona kweHodges University kuphela.
imiklomelo: Ophumelele emncintiswaneni uzothola ithoyizi elilodwa eliphambili leHodges Hawk. Uma abafaka izicelo abaningi beletha igama elifanayo lokuwina, khona-ke owinile oyedwa uzokhethwa ngokungahleliwe. Umklomelo awuguquguquki. Noma iziphi izindleko ezihlobene nomklomelo, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo noma iyiphi intela yenhlangano, yezwe, kanye / noma yendawo, kuzoba yiwo kuphela umthwalo woMnqobi. Akukho ukufakwa komklomelo noma ukudluliswa / ukwabiwa komklomelo kwabanye noma isicelo sokulingana kwemali nguWinner esivunyelwe. Ukwamukelwa komklomelo kuyimvume yokuthi iHodges University isebenzise igama likaWinner, ukufana, nokungena ngenhloso yokukhangisa nokuhweba ngaphandle kwesinxephezelo, ngaphandle uma kuvinjelwe umthetho. IHodges University, ngokubona kwayo, ingakhipha ithoyizi elingaphezu kwelilodwa kwabangenele.
Izimo: Amathuba okuwina ancike kwinani lokufakiwe okufanelekile okutholiwe.
Ukukhethwa Kowinile Nesaziso: Ophumelele uzokhethwa nguMkhandlu oPhethe waseHodges University. Owinile uzokwaziswa nge-imeyili kungakapheli izinsuku ezimbili ngemuva kokukhethwa kukaWinner. IHodges University ngeke ibe nesibopho sokwehluleka kukaWinner ukuthola izaziso ngenxa yogaxekile, i-imeyili engafuneki noma ezinye izilungiselelo zokuphepha noma ukunikezwa kukaWinner kolwazi lokuxhumana olungalungile noma olungasebenzi. Uma uWinner engathintwa, engafaneleki, ehluleka ukufuna umklomelo ezinsukwini eziyisikhombisa zebhizinisi kusukela ngesikhathi kuthunyelwe isaziso somklomelo, noma ehluleka ukubuyisa ngesikhathi isimemezelo esenziwe futhi esenziwe futhi sakhishwa njengoba kudingeka, umklomelo ungalahlekelwa futhi omunye Ophumeleleyo kukhethiwe. Ukutholwa nguWinner komklomelo onikezwe kulo mncintiswano kunemibandela yokuhambisana nanoma yimuphi umthetho nayo yonke imithetho, kanye nezwe. NOMA YINI UKwephulwa kwale mithetho esemthethweni eyenziwe ngumnqobi (kwa-HODGES UNIVERSITY'S DISLE DISCRETION) KUZOPHUMELELA EKUNQOBELWENI KOMNQOBI NJENGOMNQOBI WOMncintiswano, KANYE NONKE AMALUNGELO NJENGOMNQOBI NGOKUSHESHA AQEDIWE.
Amalungelo Onikezwe Nguwe: Ngokungenela lo mncintiswano, umela futhi uqinisekisa ukuthi okufakwayo kungumsebenzi wokuqala wobunikazi, futhi akuphuli amalungelo noma yiliphi iqembu lomuntu wesithathu noma amalungelo empahla. Uma ukungena kwakho kwephula ilungelo lobunikazi lomunye umuntu, uzokhishwa ekuboneni kweHodges University. Uma okuqukethwe okufakile kuthiwa kuthinta ukwephulwa kwanoma imaphi amalungelo wobunikazi noma obuhlakani benkampani yangaphandle, uzokhokhela noma uvikele lezo zimangalo ngemali yakho kuphela. Kufanele uvikele, uvikele futhi ubambe iHodges University engenabungozi kunoma yisiphi isimangalo, ukuqhubeka, izimangalo, isikweletu, ukulahleka, ukulimala, izindleko noma izindleko, okungenzeka ukuthi iHodges University izithole, ihlupheke, noma kudingeke ukuthi ikhokhe ngenxa yalokhu kwephula umthetho noma kusolwa ukwephulwa kwelungelo lomuntu wesithathu.
Imigomo NemibandelaI-Hodges University iyaligodla ilungelo, ngokubona kwayo, ukukhansela, ukunqamula, ukuguqula noma ukumisa umncintiswano uma kufanele igciwane, isinambuzane, ukungenelela kwabantu okungagunyaziwe, ukukhwabanisa, noma enye imbangela engaphaya kwamandla kaHodges University ekhohlakele noma ethinte ukuphathwa, ukuphepha, ubulungiswa, noma ukuziphatha okulungile komncintiswano. Esimweni esinjalo, iHodges University ingakhetha uMnqobi kukho konke okufakiwe okufanelekile okutholwe ngaphambi kanye / noma ngemuva (uma kufanele) isenzo esithathwe yiHodges University. IHodges University inelungelo, ngokubona kwayo, lokungavumeli noma ngubani ophazamisa noma ozama ukuphazamisa inqubo yokungena noma ukusebenza komncintiswano noma iwebhusayithi noma ophula le Migomo Nemibandela. IHodges University inelungelo, ngokubona kwayo, ukugcina ubuqotho bomncintiswano, ukuvota amavoti nganoma yisiphi isizathu, kufaka phakathi, kepha kungagcini kulokhu: okufakiwe okuningi okuvela kumsebenzisi ofanayo ovela kumakheli e-IP ahlukile; okufakiwe okuningi okuvela kukhompyutha eyodwa ukudlula lokho okuvunyelwe yimithetho yomncintiswano; noma ukusetshenziswa kwama-bots, ama-macros, imibhalo, noma ezinye izindlela zobuchwepheshe zokungena. Noma imuphi umzamo womuntu ongenayo wokulimaza ngamabomu noma iyiphi iwebhusayithi noma ukubukela phansi ukusebenza okusemthethweni komncintiswano kungaba ukwephula imithetho yezobugebengu neyomphakathi. Uma kwenzeka lowo mzamo, iHodges University inelungelo lokufuna ukulimala ngokugcwele ngokwezinga elivunyelwe umthetho.
Umkhawulo of Ugibe: Ngokungena, Uyavuma ukukhipha futhi ubambe iHodges University engenabungozi nezinkampani ezingaphansi kwayo, abaxhumana nabo, ama-ejensi wokukhangisa nokwenyusa, abalingani, abamele, amanxusa, abalandelayo, ababela, abasebenzi, izikhulu nabaqondisi kunoma yisiphi isikweletu, ukugula, ukulimala, ukufa, ukulahlekelwa, ukumangalelwa, ukumangalelwa, noma ukulimala okungenzeka, ngqo noma ngokungaqondile, noma ngabe kubangelwa ubudedengu noma cha, kusuka: (i) ekubambeni iqhaza kwalowo ongenele umncintiswano kanye / noma ekwamukelweni kwakhe, ukuphatha, ukusebenzisa noma ukusebenzisa kabi noma yikuphi umklomelo noma enye ingxenye yalokho; (ii) ukwehluleka kwezobuchwepheshe kwanoma yiluphi uhlobo, kufaka phakathi kepha kungagcini ngokungasebenzi kwanoma iyiphi ikhompyutha, ikhebula, inethiwekhi, i-hardware, noma isoftware, noma enye imishini yokusebenza; (iii) ukungatholakali noma ukufinyeleleka kwanoma yikuphi ukuhanjiswa, ucingo, noma insiza ye-Intanethi; (iv) ukungenelela kwabantu okungagunyaziwe kunoma iyiphi ingxenye yenqubo yokungena noma yePhromoshini; (v) iphutha elenziwa nge-elektroniki noma lomuntu ekuphathweni kwePhromoshini noma lapho kucubungulwa okufakiwe
Izingxabano: Lo mncintiswano ULAWULWA YIMITHETHO YASE-United States NAKHO [isifundazwe / isifundazwe sakho], NGAPHANDLE KWENHLONIPHO YOKUPHIKISANA KWEZIMFUNDISO ZOMTHETHO. Njengombandela wokubamba iqhaza kulo mncintiswano, umbambiqhaza uyavuma ukuthi noma yiziphi izingxabano ezingeke zixazululwe phakathi kwamaqembu, nezimbangela zezenzo ezivela noma ezixhumene nalo mncintiswano, zizoxazululwa ngazodwana, ngaphandle kokubheka noma iluphi uhlobo lwesenzo sekilasi , kuphela enkantolo etholakala [esifundazweni sakho / esifundazweni] esinamandla okuphatha. Ngaphezu kwalokho, kunoma iyiphi impikiswano enjalo, umhlanganyeli angavunyelwa ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ukuthi athole imiklomelo, futhi ngalokhu uyekelela wonke amalungelo omonakalo, wokujezisa, owenzekile, noma owalandela, kufaka phakathi imali ekhokhelwa ngummeli, ngaphandle kwezindleko zangempela zomhlanganyeli ( okusho izindleko ezihambisana nokungenela lo mncintiswano). Umbambiqhaza uqhubeka nawo onke amalungelo okuba nomonakalo ophindaphindiwe noma owandisiwe.
Inqubomgomo yobumfihloImininingwane ethunyelwe ngokufaka incike kwinqubomgomo yobumfihlo eshiwo kuwebhusayithi yeHodges University. Ukuze ufunde Inqubomgomo Yobumfihlo, Chofoza lapha.
Uhlu Lomnqobi: Ukuthola ikhophi yegama likaWinner noma ikhophi yale Mithetho Esemthethweni, thumela isicelo sakho kanye nemvilophu enesitampu, ezithunyelwe wena ku: Hodges University Marketing Department, 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, Fl 33966, USA. Izicelo kumele zamukelwe ngaphambi kuka-Okthoba 23, 2020.
Umxhasi: Umxhasi womncintiswano nguMnyango Wezokumaketha waseHodges University, 2647 Professional Circle, Naples, FL 34119 USA.